सिटिजन बैंकको एफपिओ खुल्यो, कति गर्ने आवेदन ? – Samaj Khabar
सिटिजन बैंकको एफपिओ खुल्यो, कति गर्ने आवेदन ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०१:५८
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको मंगलबारदेखि ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपीओ बिक्री खुला भएको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १०० रुपैयाँ नै प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँका दरले एफपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । यसमा साउन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा एफपीओ नबिकेमा भने भदौ १४ गतेसम्म भर्न सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम २३०० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो एफपीओमा सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिनुपर्नेछ । एफपीओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल हो । बैंकले संस्थापक र साधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व अनुपात ५१ः४९५ कायम गर्न एफपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सिटिजन्सको एफपीओलाई ग्रेड ३ प्लस रेटिङ दिएको छ । यसले औसतमा राम्रो अवस्था जनाउँछ । सिटिजन्सले एफपीओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७ करोड ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०१:५८ मा प्रकाशित